Zingase ziphume sezinemali iziboshwa ejele | isiZulu
Zingase ziphume sezinemali iziboshwa ejele
Kulimale-13 iziboshwa zihlasela amaphoyisa
Livelile iphoyisa elizama ukweqisa iziboshwa
Kuboshwe iphoyisa ngokuzama ukweqisa iziboshwa
Johannesburg - Isiboshwa esiziphethe kahle kungenzeka sithi sidedelwa ejele sibe sesifumbethe isamba esilinganisela ku-R20 000, njengamali ezosisiza siqale kabusha impilo, ngaphandle kokwephula umthetho.
Lokhu kungenzeka kuphela uma isiboshwa sizovuma ukuhlumeliswa isimilo siphinde sibe nenhlanhla yokuqashwa sisebenze imisebenzi yangaphakathi ezinhlelweni zoMnyango wezamaJele, kusho uNgqongqoshe woMnyango uSbu Ndebele, ekhuluma nabezindaba zeSowetan.
UNdebele usho kanjena ekhuluma eBoksburg, kuhlangene izinhlaka ezehlukene kudingidwa ngengwadla yokugcwala kwamajele, ezinye izindlela zokugweba izephula mthetho kanjalo nezinye izinto ezithinta izigwebo emazweni ase-Afrika.
Izinhlelo zamabhizinisi ekuzosebenza kuwo iziboshwa ziwuhlelo oluvele seluyaqhubeka.
Iziboshwa zisiza ezinhlelweni ezithinta ezolimo kanye nokwakhiwa kwefenisha esetshenziswa emiNyangweni kahulumeni, enye ithengiselwe umphakathi.
UNdebele uthi iziboshwa zizohola ngemisebenzi eziyenzayo kodwa imali ziyoze ziyithole uma sezidedelwa.